FreeOrion, usoro ntụgharị gbadoro ụkwụ na-emeri egwuregwu | Site na Linux
Ọchịchịrị | | Egwuregwu
Ọ bụrụ n'ị bụ otu n'ime ndị egwuregwu egwuregwu na-amasị ma ọ bụ nke mmeri ụwa, egwuregwu anyị ga-eweta taa nwere ike ịmasị gị. Egwuregwu anyị ga-ekwu maka ya bụ “FreeOrion"nke bụ usoro atụmatụ aghụghọ nke mmeri galactic nke sitere na egwuregwu "Master of Orion".
N'oge egwuregwu, Ndị na-egwu egwu na-asọrịta mpi n'etiti onwe ha n'ọhịa nke ịchị ụwa, ịzụlite mmepeanya nke aka ha ma mepụta akụrụngwa. Dị ka ọ na-ahụkarị egwuregwu 4X ndị a (eXplore, eXpand, eXploit na eXterminate), ndị na-egwu egwu ga-enyocha gburugburu ha, na-achịkwa mbara ala ndị ọhụrụ, jikwaa ọnọdụ akụnụba ha, nyochaa teknụzụ ndị dị egwu, mepee ike ndị agha wee merie ndị agbata obi ha na n'ikpeazụ, ụyọkọ kpakpando dum.
Njirimara akọwapụtara nke FreeOrion bụ iche iche kediegwu umu ndi bi na uwa nke FreeOrion na bụkwa akụkọ ihe mere eme pụrụ iche nke ụyọkọ kpakpando, yana nhazi nke ụgbọ mmiri ọhụrụ nwere ike iji ọtụtụ hull na akụkụ ụgbọ mmiri wuru mgbe emechara nyocha, na ohere nke mmeri teknụzụ mgbe emechara nyocha.
FreeOrion na-enye onye ọrụ ikike ịtinye ederede na injin egwuregwu, Ihe oru ngo FreeOrion bu iji nye ndi obodo uzo di mfe iji hazie ndi na-egwu egwuregwu na ihe ngosi iji meputa eluigwe na ala na-eku ume na nnukwu usoro mgbasa ozi.
FreeOrion ọ bụ egwuregwu ikpo okwu obe (maka Windows. MacOS na Linux) na oghere mepere emepe, isi iyi egwuregwu ahụ nwere ikikere n'okpuru ikikere GPL v2 yana mgbasa ozi ya n'okpuru ikike Creative Commons Attribution-Attribution 3.0.
1 Ihe ndi choro iji wụnye ma na-agba FreeOrion
2 Etu esi etinye FreeOrion na Linux?
Ihe ndi choro iji wụnye ma na-agba FreeOrion
Iji na-agba ọsọ FreeOrion na sistemụ gị, ihe kaadị OpenGL 2.1 dakọtara na ihuenyo nwere mkpebi opekempe nke opekata mpe 800 × 600.
Banyere sistemụ arụmọrụ FreeOrion, ọ chọrọ opekata mpe Windows 8 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, Mac OSX 10.9 ma ọ bụ mgbe e mesịrị ma ọ bụ nke ọ bụla Linux nkesa na-akwado.
Etu esi etinye FreeOrion na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye FreeOrion na kọmpụta ha, ha nwere ike ịme nke ahụ site na isoro ntuziaka anyị kesara n'okpuru.
A na-ekesa FreeOrion na ụdị abụọ, nke ihe kachasị akwadoro ịwụnye bụ nsụgharị siri ike, nke nchịkọta ya ọnụọgụ abụọ dị n'ime ọtụtụ nkesa Linux.
Ọ bụ ezie na nsụgharị ọzọ bụ ụdị mmepe, nke nwere nbudata kwa izu nke emere maka ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị nyocha na-achọ nyochaa ma ọ bụ nye aka na mmepe. Enwere ike ịnweta kwa izu dị ka ọnụọgụ abụọ (maka Windows na MacOS). N'ihe banyere Linux, a ga-eme mkpokọta.
Iji wụnye FreeOrion, n’ihe banyere ndị ji Debian, Ubuntu, Linux Mint ma ọ bụ nkesa ọ bụla ọzọ dabere ma ọ bụ nweta nke a. Na ọnụ anyị ga-pịnye iwu na-esonụ:
Ugbu a maka ndị bụ ndị ọrụ Fedora ma ọ bụ nkesa ọ bụla nke na-esite na ya. Emere nwụnye ahụ site na iji kọmputa ede iwu na-eso na ọnụ ya:
N'ihe banyere ndị bụ ndị ọrụ nke ụdị ọ bụla nke openSUSE, naanị mepee ọnụ na ya pịnye:
Ndị ahụ bụ ndị ọrụ Linux cha cha ma ọ bụ ụfọdụ distro sitere na nke a:
Finalmente maka ndị bụ Arch Linux, Manjaro, Arco Linux ọrụ ma ọ bụ nkesa ọ bụla ọzọ sitere na Arch Linux. Ha ga-enwe ike ịwụnye egwuregwu ahụ site na ebe nchekwa AUR.
Naanị ha kwesịrị ịnweta nchekwa tinye na faịlụ pacman.conf ma nwee ọkachamara AUR.
Iwu inye nwụnye bụ nke a:
Maka ndị na-ahọrọ ụdị mmepe, ha nwere ike ịkpọ ndụmọdụ gbasara mkpokọta yana ịmatakwu gbasara egwuregwu ahụ Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Egwuregwu » FreeOrion, usoro ntụgharị egwuregwu na-agbadoro ụkwụ na-agbadoro ụkwụ